तपाईं विवाहपछि हनिमुन जानुभएको ठाउँ कुन हो ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः पुस ६, २०७५ - साप्ताहिक
तपाईं विवाहपछि हनिमुन जानुभएको ठाउँ कुन हो ?
औपचारिक रूपमा हनिमुन भनेर त होइन तर पहिलोपटक डेटिङचाहिँ पर्वत, कुस्माको अग्लो झोलुङ्गे पुल गएका थियौं । विवाह भैसकेपछि बेगनास र पोखरा पुग्यौं ।
प्रकाश सपूत, गायक तथा मोडल
पोखरा गएको थिएँ ।
सुजन तिमल्सिना, गायक
विवाहपछि हामी हनिमुनका लागि पोखरा गएका थियौं ।
तनहुँ गएका थियौं ।
राजु ढकाल, गायक
हामीले आफ्नो हनिमुन पोखरामा मनाएका थियौं ।
हाम्रो हनिमुन त घरमै भयो ।
हामीले विवाह गर्दा हनिमुन भनेको के हो भन्ने नै थाहा थिएन, तर हामी विवाह हुनेबित्तिकै घुम्न गएको चाहिँ पोखरा हो ।
मैले हनिमुन यात्रा तय गरिनँ ।
थानेश्वर गौतम, गायक
हनिमुन मनाउन विदेश जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले हामी स्वयम्भू गएका थियौँ ।
हनिमुन नै मनाउन भनेर कतै गइएन ।
हामीले विवाहपछिको हनिमुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा मनाएका थियौं ।
रमेश उप्रेति, अभिनेता
विवाहताका मेरो बसाइ काठमाडौंमा थियो । त्यसैले विवाह गरियो श्रीमतीलाई काठमाडौं ल्याइयो अनि यतै हनिमुन मनाइयो ।
हामीले पोखरामा हनिमुन मनाएका थियौं ।
सुवास प्रधान, इभेन्ट म्यानेजर
हामी हङकङ गएका थियौं । -धीरज राई, गायक
यो प्रश्नले बुढी फेरि एकपटक रिसाउने भइन् । हनिमुन मनाउने फुर्सद नभएर विवाह भएको एक वर्षपछिमात्र पोखरा गएका थियौं ।
प्रदीप भट्टराई, निर्देशक
हामी विवाहपछि थाइल्यान्डको फुकेट गएका थियौं ।
अनिलकेशरी शाह, बैंकर्स
म हनिमुन मनाउन गाउँबाट काठमाडौं आएँ । राजधानीका विभिन्न मन्दिर अनि पार्कहरू घुमियो । मेरी श्रीमती त्यतिबेलै पहिलोपटक काठमाडौं आएकी हुन् ।
राजनराज शिवाकोटी, गायक तथा संगीतकार
हामी हनिमुन मनाउन पोखरा गएका थियौं ।
लक्ष्मण पौडेल, निर्देशक
दार्जीलिङ, कोलकाता, मुम्बई, गोवा, दिल्ली आदि घुम्न गएका थियौं ।
विकास रौनियार, फोटो पत्रकार
विवाहपछिको पहिलो एनिभर्सनीमा चााहिँ पोखरा गइयो ।
गम्भीर विष्ट, कोरियोग्राफर
१७ वर्षअघिको कुरा हो । हामी प्रेममा थियौं, प्रेम भएको २ वर्षपछि हामीले भागेर विवाह गर्‍यौं । त्यतिबेला पोखरा, काठमाडौंतिर लाने अवस्था थिएन । मैले उनलाई रातको समयमा भगाएको थिएँ । घरमुनि खरबारी थियो, हामीले त्यहाँ ४ घण्टाजति बितायौं । बिहान ५ बजेतिर घरमा लिएर आएको थिएँ । त्यतिबेला हनिमुन के हो भन्ने पनि थाहा थिएन । यसरी नै दिनहरू बित्दै गए ।
रामजी खाँड, गायक
आफू त पोखराकै परियो । हनिमुनका लागि पोखराभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ अन्त कहाँ होला र ? त्यसैले लेकसाइडतिरै हनिमुन मनाइयो ।
बिनोद बानियाँ, गायक
पोखरा गएका थियौं ।
अन्सु थापा, हास्य अभिनेत्री
हनिमुन भने पनि जे भने पनि विवाहपछि हामी पहिलो पटक सँगै गुण सिनेमा हलमा सिनेमा हेर्न गएका थियौं ।
केदार घिमिरे, अभिनेता
हाम्रो हनिमुन भन्ने नै भएन । म सुटिङका लागि जोमसोममा थिएँ । त्यहिबेला विवाह गर्ने कुरा भयो अनि हामीले सर्लाही पुगेर विवाह गर्‍यौं । विवाह लगत्तै म सुटिङका लागि पोखरा गैहालें ।
सञ्चिता लुर्इँटेल, अभिनेत्री
विवाहपछि हामी पोखरा, काठमाडौं, विराटनगर आदि ठाउँ पुग्यौं तर हनिमुन मनाउने भनेर होइन ।
इतु जोजिजु, गायिका
प्रकाशित :पुस ६, २०७५
तपाईंको आफ्नै जात्रा भएको क्षण कुन हो ?
साउनमा व्रत लिएर कसैले तपाईंलाई मागेको होला कि नहोला ? श्रावण ११, २०७६